Ndingayenza njani i-GIF ye-Instagram | Abadali be-Intanethi
Iris Gamen | 28/03/2022 21:30 | Amaqhinga
Ukuba unomdla kwi indlela yokwenza i-gifs kwi-instagramZola, ukwindawo elungileyo. Kule posi, sintywila nzulu kwihlabathi leeGIF.
gifs a isixhobo esigqibeleleyo sokongeza kumabali akho e-Instagram; ziyahlekisa, zitsala umdla kubalandeli bethu, ukuya kuthi ga kwinqanaba lokuba sidibane nombulelo kulo mxholo.
El isithako esiyimfuneko xa usenza ii-gifs zale nethiwekhi yoluntu, kukuyila. Ezi oopopayi ziye zaba zezona zixhobo zisetyenziswa kakhulu xa uhlela amabali ethu, ke yinto eqhelekileyo ukuba uzibuze ukuba uzenza njani iiGIF ze-Instagram.
1 Yintoni i-GIF?
2 Amanqaku amahle eeGIF
3 Uyenza njani i-GIF ye-Instagram
4 Iiapps zokwenza iiGIF ze-Instagram
5 Uyilayisha njani i-GIF yam kwi-Instagram?
Ii-gifs bezikhona babe lukhuphiswano lweememes, bade babe yenye yazo. Kodwa bambalwa abayaziyo ngokwenene intsingiselo yazo kunye nendlela eziphunyezwa ngayo.
I-Gif sisishunqulelo seFomathi yoTshintsho lweMizobo. Ukuze sonke siqonde, yi-a iseti yezakhelo, ethi xa idlalwa kwiluphu, yenze uphiliso. Ubude bexesha lale mifanekiso incinci iphakathi kwemizuzwana emi-5 kunye ne-10.
Amanqaku amahle eeGIF
Akubalulekanga nje ukwazi ukuba yintoni na i-GIF, kufuneka wazi ukuba ngawaphi amanqaku afanelekileyo okwenza ezi oopopayi zincinci.
Inqaku lokuqala elihle kukuba Ifomathi yeGIF, ilula kunefomathi yokugcina ividiyo. IiGIF zenziwe ngemifanekiso, ngoko oku kunceda ubunzima ukuba bube bungaphantsi kobo bevidiyo.
Ukuba zikhaphukhaphu, zisikhokelela kwinzuzo elandelayo, kwaye yileyo inokongezwa kumaqonga ahlukeneyo. Asikwazi ukuzisebenzisa kuphela kwiintanethi zethu zentlalo, kodwa nakwiincwadi ezinjengalezi, amaphepha ewebhu omntu, njl.
Xa usebenza nemifanekiso eshukumayo, nceda ukufumana ingqalelo yababukeli ngokukhawuleza kunemifanekiso eqhelekileyo. Ukuba i-GIF ihlekisa kuwe, inokunamathela kwinkumbulo yakho.
Into yokuba zihlekisa, zibangela a Imvakalelo yovelwano, oko kukuthi, ii-GIFs zinokusenza sihleke, sivuyise kwaye sivuse ubuchule bethu kwaye sifune ukuyila eyethu.
Kwaye okokugqibela kodwa okungancinci, i Ii-GIFs zinokuhamba ngentsholongwane, kwimizuzu nje embalwa. Ziifayile ezinobunzima obuncinci, kwaye ngenxa yoku kulula kakhulu ukuzisasaza, zombini kwi-Instagram nakwamanye amanethiwekhi.
Uyenza njani i-GIF ye-Instagram
Kukho izicelo ezahlukeneyo okanye amaphepha ewebhu asivumela ukuba senze i-GIF yethu ukusuka ekuqaleni, kodwa zonke zabelana ngamanyathelo amane, ngaphambi kokuba zinike ubomi.
Into yokuqala kukuba imifanekiso ekhutshelweyo, imifanekiso eya kwenza i-GIF yethu. Ukuba awufuni ukuba ibe yimifanekiso, kodwa ividiyo, kufuneka ube ne-URL egciniweyo.
Nje ukuba unemifanekiso okanye ividiyo ilungisiwe, kuya kufuneka yifake kwiqonga oza kusebenza ngalo. Kwinqaku elilandelayo sikunika ezimbalwa ukuze wazi.
Emva kokulayisha imifanekiso, inyathelo elilandelayo khetha isantya sokudlala oopopayi, ixesha lobude, kwaye walathe kwindawo yokuqala.
Kwaye ekugqibeleni, isicelo iya kubonisa kumboniso wendlela iGIF ejongeka ngayo, ukuba awuqinisekanga unokuyiguqula ngezicwangciso, kwaye xa ugqibile ukuyikhuphela.
Iiapps zokwenza iiGIF ze-Instagram
Ngenye ye ezona zicelo zidumileyo zokwenza ii-GIFs zenethiwekhi yoluntu. Awunayo nje into yokuba wenze eyakho, kodwa unokufumana iintlobo ezininzi zeeGIF zokukhuphela.
Enye yeengongoma ezimbi kukuba xa yenza kwaye ukhuphele i-GIF ivela nge-watermark, ukongeza kwinto yokuba ifayile ekhutshelweyo inokuba nzima ngenxa yesisombululo esiphezulu.
Nangona inalo nqaku libi, iseyeyona nto ilungileyo yokwenza iiGIF ze-Instagram, ukongeza unethuba lokuzilayisha ngokuthe ngqo kuthungelwano.
Ifana kakhulu neqonga langaphambili, unayo kungenzeka ukulawula isantya sokudlala, ukongeza ukukwazi ukuxuba iiGIF ezahlukeneyo. Inqaku elincomekayo le-GifMaker kukuba ikuvumela ukuba wongeze umculo kwimifanekiso eshukumayo, into engakuvumeliyo zonke.
Enye yezona zicelo zisetyenziswa kakhulu ukwenza ii-GIF ezikumgangatho ophezulu ukusuka ekuqaleni, ngoncedo lwezixhobo eziphambili. GifGuru ivumela ukuba siguqule iividiyo zethu esizithandayo okanye imifanekiso ibe yi-GIFs, ngendlela elula kakhulu.
Singayenza ukusuka ekuqaleni, nje ukurekhoda ujongano lwekhamera okanye ukuzihlela ngoko nangoko. Le app ibonelela ngeseto zesantya, yongeza izicatshulwa okanye izincamathelisi, kunye nezihluzo ezahlukeneyo.
Sithetha kwakhona, malunga newebhusayithi yasimahla apho unokwenza khona ii-GIFs ngokukhawuleza nangokulula. Liqonga apho akuyomfuneko ukuba ube nomsebenzisi, kwaye apho uya kufumana izixhobo ezimbalwa, ezinokukuthatha ixesha ukuba usebenze ngazo.
GIFPAL, uyavuma ukuba a ukhuphelo oluthe ngqo lwendalo kwaye uzilayishe kwiintanethi zentlalo ngaphandle kwengxaki.
Kukho amaqonga amaninzi okanye usetyenziso onokuthi ngalo wenze ii-GIF zakho zobuqu, kolu papasho sikushiye ezine ezisetyenziswa kakhulu ukuza kuthi ga ngoku.
Uyilayisha njani i-GIF yam kwi-Instagram?
Ukuba sele sigqibile ukwenza oopopayi, indlela elandelayo kukuyifaka kwinethiwekhi yethu yoluntu. I Iqonga le-Giphy, esithethe ngalo, likuvumela ukuba ulilayishe kwi-Instagram ngaphandle kwengxaki.
Into yokuqala kuya kufuneka siyilayishe kwiqonga elithethiweyo. I I-GIF ingcono, ukuba inemvelaphi ecacileyo, kuba ikuphela kwendlela eyamkelekileyo i-Instagram.
Nje ukuba siyifake eqongeni, yongeza amagama angundoqo, ukwenzela ukuba ngexesha lokukhangela livele kwiintsingiselo.
Kwaye inyathelo elilandelayo liya kuba qinisekisa iakhawunti yakho kwiGiphy. Kule nto kufuneka uyenze njengomculi. Okulandelayo, gcwalisa ulwazi oluceliweyo kwaye ulinde ukuba isicelo sakho samkelwe.
Inqaku elibalulekileyo ekufuneka ligcinwe engqondweni kukuba kufuneka layisha esakho isiqulatho, awukwazi ukukopa ezinye oopopayi.
Kwaye ngayo yonke le nto unokufumana oopopayi bakho abancinci kwi-Instagram. Khumbula ukuba kufuneka ube nobuchule kunye nentsusa xa usenza eyakho i-GIF, esiqiniseke ngayo ukuba uya koyisa.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ukudala kwi-intanethi » ngokubanzi » Amaqhinga » Ndingayenza njani i-GIF ye-Instagram